သက်ဝေ: December 2011
ထိုနှစ်က ဒီဇင်ဘာသည် ဒီဇင်ဘာ ပီသခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာ၏ နေ့ရက်များထဲမှာမှ အေးမြစွာ ချမ်းစိမ့်နေပြီး မှုန်လက်နေသော နှင်းစက်များ အကြားတွင် အလှကြီး လှနေခဲ့သော နေ့စွဲတခု ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုနေ့စွဲမှာ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်... ခရစ်စမတ်နေ့ မတိုင်ခင် အကြိုနေ့ ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းပိတ်ရက် မဟုတ်သောကြောင့် ကျောင်းသွားရန် ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် သူက ဖုန်းဆက်ပြီး သူ့ကျောင်းကို လိုက်လည်ပါ ဟု (ထူးထူးဆန်းဆန်း) ဖိတ်ခေါ်လေသည်။ ကျောင်းဖွင့်ကာစ နေ့ရက်များ ဖြစ်သောကြောင့် တကြောင်း၊ နောက်တနေ့မှာ ခရစ်စမတ် ကျောင်းပိတ်ရက်များ ရောက်တော့မည်က တကြောင်းတို့ကြောင့် ကျောင်းမှာ စာသိပ် မသင်မှာ သေချာနေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းမသွားချင်လျှင် မသွားပဲ နေနိုင်သော အနေအထားမှာ ရှိသည်။ သို့သော်လည်း သူ့ကျောင်းကို တခါမှ အလည်အပတ် မသွားဖူးသောကြောင့် စိတ်ထဲမှာ အနည်းငယ် တွန့်ဆုတ်နေမိပြန်သည်။ ကိုယ့်စိတ်ကို သိနေသော သူက ထပ်ပြောသည်… သူတို့ကျောင်းမှာ စာမေးပွဲနီးနေပြီမို့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ အနည်းငယ်သာ ရှိသည်… အေးအေးဆေးဆေး မုန့်စားရင်း စကားပြော ကြတာပေါ့… တဲ့…။ သူက ခဏ ခဏ ထပ်ခေါ်နေသောကြောင့် အိုကေလေ… ဒါဆိုလည်း လိုက်လည်မယ် ဟု ပြန်ပြောလိုက်သည်။
တကယ်ဆို ယခုကဲ့သို့ ဟိုမရောက် သည်မရောက် အခြေအနေမျိုးမှာ သူ့ဆန္ဒကို လိုက်လျောခြင်းသည် သူ့ကို ခေါင်းညိတ် လက်ခံတော့မည် ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မျိုးများ သက်ရောက်သွားလေမလားဟု စိုးစဉ်းမျှ မတွေးတတ်ခဲ့ပါ။ ထို့နောက် သာမန်နေ့ရက်များမှာလိုပင် ရိုးရှင်းသော အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်ပြီး ပြင်ဆင် ခြယ်သမှု ကင်းကင်းဖြင့် တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော် ခါတိုင်း ကျောင်းသွားသလို မျက်နှာပြောင်တလင်းဖြင့် သူ့ကျောင်းကို အလည် လိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
သူ ပြောထားသလိုပင်… သူ့ကျောင်းက ကင်တင်းတွေမှာရော အတန်းတွေမှာပါ တော်တော်လေး လူရှင်းနေသည်ကို တွေ့ရသောကြောင့် အနည်းငယ်တော့ အသက်ရှူချောင်သွားခဲ့သည်။ ထိုအခါ သူ မသိအောင် သက်ပြင်းတချက်ကို တိတ်တိတ် ခိုးချလိုက်မိသည်။ သို့သော်လည်း သူက သိဖြစ်အောင် သိကာ အနေရ မခက်စေရန် ကင်တင်းထဲမှ လူသိပ်မများသော ဆိုင်တခုမှာ ထိုင်စေခဲ့သည်။ သိပ်မကြာခင်မှာ ကျောင်းသူတစု မလှမ်းမကမ်းမှ ဖြတ်သွားပြီး ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့်ဖြင့် လှမ်းကြည့်သွားကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ သူ ပြောပြသောကြောင့် သူ့ အတန်းဖေါ်များဟု သိရသည်၊ ရှက်စိတ်ကြောင့် လူက အငွေ့ပျံချင်နေပြီ။ မိန်းကလေး တန်မဲ့ ရှည်ရှည်ရှောရှော လိုက်လာမိခြင်းအပေါ် နောင်တလည်း ကြီးစွာ ရမိသည်…။ သူတို့တတွေ အဝေးမှ ကြည့်ရုံသာ ကြည့်သွားကြပြီး အနားကိုလာ နှုတ်မဆက်ကြသည်ကိုပင် ကျေးဇူးကြီးစွာ တင်ရမလို…။ ထို့နောက်တော့ လူက ထူပူနေပြီး နေ့လည်စာကို ခေါက်ဆွဲကြော် စားမိခဲ့လေသလား ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ စားမိခဲ့လေသလား ဘာတွေ စားလို့ ဘာတွေ သောက်ဖြစ်ခဲ့သလဲ သေသေချာချာ မမှတ်မိတော့ပါ…။
နေ့လည်စာ စားပြီးတော့ သူက စကားတွေ အများကြီး ပြောပါသည်။ အရင် ကိုယ့်အိမ်ကိုလာလည်တတ်သော အချိန်တွေက အလွန် စကားနည်းသော သူသည် တကယ့် တကယ်မှာ စကားအလွန်များကြောင်း ထိုနေ့ကမှ သိလိုက်ရသည်။ သူ ပြောပြနေသမျှ အကြောင်းအရာများသည် သိပ်စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းလှသောကြောင့် တချို့တလေကိုသာ မှတ်မိပါသည်။ တချိန်လုံး နားထောင်သူ သက်သက်ဖြစ်နေသောကြောင့် ပျင်းရိ ငြီးငွေ့လာသည်က တကြောင်း၊ ကင်တင်းထဲမှာ လူ ကျဲပါးသွားသောကြောင့် နေရတာ အနည်းငယ် သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်လာကာ မူလ ဗီဇစိတ်တွေ ပြန်ပေါ်လာပြီး သူ့ကို ရစ်ချင်လာပါသည်။ ထို့ကြောင့် နေကြာစေ့ စားချင်သည် ဟု ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် ပြောချလိုက်ပါသည်။
သူက ချက်ချင်းပင် နီးရာဆိုင်တဆိုင်မှ နေကြာစေ့ သုံးထုပ်ဝယ်ပြီး ပြန်လာပါသည်။ ထိုအချိန်က မိုးပုလဲ နေကြာစေ့တထုပ်၏ တန်ဖိုးမှာ တကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ ရစ်လက်စနှင့် ဆက်ရစ်ချင်သောကြောင့် နေကြာစေ့များကို အခွံ ခွာကျွေးပါလား ဟု တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ ဘာမဆို သဘောကောင်းစွာဖြင့် လိုက်လျောချင်နေသော အချိန်ကာလမျိုး ဖြစ်သောကြောင့် နေကြာစေ့များကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ခွာကျွေးပါသည်။ နေကြာစေ့များအနက်က ဝဝလေးများကိုသာ ရွေးခွာရန်နှင့် အသားမရှိအောင် ပိန်ခြောက်နေသော နေကြာစေ့များကို မခွာရန်လည်း ဆရာလုပ်လိုက်သေးသည်။ သူခွာကျွေးသော နေကြာစေ့အဆံများကို ခွာလို့ လက်မလည် အလျင်မမှီလောက်အောင်ပင် တခုပြီးတခု တလစပ် ကောက်စားနေသော ကိုယ့်ကို သူက သဘောတကျနှင့် ပြုံးရယ်နေပါသည်။ နေကြာစေ့ကို အတော်ကြိုက်သလား... ဟုလည်း မေးပါသည်။ ခွာပြီးသား စားရလျှင် ကြိုက်သည်ဟု ပြန်ဖြေလိုက်သောအခါ သူ နောက်တကြိမ် အားရပါးရ ပြုံးရယ်ပြန်ပါသည်။ နေကြာစေ့များကို မနားတမ်းခွာနေရသောကြောင့် အခုနကလောက် စကားများများ မပြောနိုင်တော့သော သူ့ကို စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်ပြီး ရယ်မောနေမိပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို စကားစပ်မိတိုင်း ကိုယ့်ကို အလွန်တရာ ညစ်ကျယ်ကျယ်နိုင်သော မိန်းကလေး ဟု မှတ်ချက်ချပါသည်။
နေကြာစေ့ သုံးထုပ်ကုန်သွားသောအခါ သူက လမ်းလျှောက်ချင်လား.. ဟု မေးပါသည်။ ထိုင်နေရသည်မှာ ညောင်းလှပြီ ဖြစ်သောကြောင့် လမ်းလျှောက်ရန် သဘောတူလိုက်ပါသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် သူ့ သူငယ်ချင်းတစု အနားကိုရောက်လာကာ ကိုယ့်ကို အကဲခတ်သော မျက်လုံးတချို့နှင့် ကြည့်ပြီး သူတို့ အချင်းချင်း စကား အနည်းငယ်ပြောကာ ထွက်သွားကြပါသည်။ သူ ပြန်ပြောပြသောကြောင့် ထိုနေ့က သူတို့ကျောင်းမှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အားလုံး ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ဆီမီးသုံးထောင် ပူဇော်ကြမည်ဟု သိရပါသည်။ သူက ဘုရားကို လိုက်သွားချင်သလားဟု မေးရာ လူများများကြားထဲ မသွားချင်သောကြောင့် ခေါင်းခါ ငြင်းဆန်လိုက်ပါသည်။
သိပ်မကြာခင် အချိန်အတွင်းမှာ ကျောင်းဝင်းထဲ လူမရှိတော့သလောက် ခြောက်သွေ့ တိတ်ဆိတ်သွားပါသည်။ ကိုယ့်ကို စူးစမ်းသော၊ အကဲခတ်သော မျက်လုံးများဖြင့် ကြည့်ကြမည့်သူများ မရှိတော့သောကြောင့် စိတ် ပေါ့ပါး သက်သာသွားကာ ကျောင်းဝင်းထဲ ဟိုကြည့် ဒီကြည့်နှင့် လမ်းလျှောက်လာခဲ့ကြပါသည်။
တနေရာအရောက်တွင် သူက အမှတ်တမဲ့နှင့် ဒါ လူသေတွေ ခွဲတဲ့ နေရာလေ… ဟု ညွှန်ပြပါသည်။ ထိုစကားအဆုံးမှာ သွေးဆုတ် ဖြူဖျော့သွားသော ကိုယ့်မျက်နှာကို တွေ့သောအခါမှ သူ့စကား အကြီးအကျယ် မှားယွင်းသွားကြောင်း သူ သိသွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကိုယ့်လက်ကို ဆွဲကာ ထိုအဆောက်အဦးနှင့် ဝေးရာဖက်ကို ခပ်သွက်သွက် ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါသည်။ သေလုအောင် ကြောက်နေသောကြောင့် လူက ထူပူနေရာ လက်ဆွဲထားတာတွေ ဘာတွေလည်း ဘာမှ သတိမထားမိခဲ့ချေ…။ မိနစ်အနည်းငယ် လျှောက်လာပြီး ထိုအဆောက်အဦးနှင့် ခပ်ဝေးဝေးကို ရောက်မှ အမောဖြေရင်း တယောက်ကို တယောက် သတိထားမိကြပါသည်။ ထိုစဉ်မှာပင် ဆွဲထားသောလက်ကို မလွှတ်သေးပဲ သူက မေးခွန်းတခုကို ကောက်ခါ ငင်ကာ မေးလိုက်တာ ဖြစ်သည်။
ထိုမေးခွန်းမှာ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်အောင် စောင့်ရအုံးမှာလား… ဟူ၍ပင်…။
ရုတ်တရက်မို့ ထိုမေးခွန်းကို ကြားလိုက်ရသောအခါ ထုံးစံအတိုင်း လူက ကြောင်သွားသေးသည်။ ပြီးမှ သတိရသွားသည်။ လွန်ခဲ့သော တနှစ်ကျော်လောက်က သူ အဖြေတောင်းစဉ်အခါက အသက်ငယ်သေးတယ် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ စဉ်းစားနိုင်မယ်... ဟူသော အူတိ အူကြောင် ဆင်ခြေမျိုး ပေးခဲ့ဖူးကြောင်း ပြန်သတိရသွားသည်။ ထိုအခါ ကြောက်နေသည့်ကြားမှ အလွန်အမင်း ရယ်ချင်သွားသေးသည်။ တဆက်တည်းမှာပင် ငါတော့ လိုက်လာမိတာ မှားပါပေါ့လား… ဟု နောင်တတွေ အကြီးအကျယ်ရကာ ဘုရားရေ ပေါင်းလည်း အခါတသိန်း တ မိသည်။
သို့သော်လည်း အစစ အရာရာ ပြေလည်နေပါလျက်နှင့် တမင် ညစ်တွန်း တွန်းပြီး အချိန်ဆွဲထားသော ကိုယ့်အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းကြီး သိနေသော သူက အဖြေကို ကိုယ်ပြန်ဖြေစရာမလိုတော့အောင် လိမ်မာပါးနပ်စွာ အရ ယူသွားခဲ့လေသည်။
ထိုနှစ်က ဒီဇင်ဘာသည် ဒီဇင်ဘာ ပီသစွာ ထူးထူးခြားခြား အစွမ်းကုန် လှပလို့ နေခဲ့သည်။ ထိုနှစ်မှ အစပြု၍ ဒီဇင်ဘာတိုင်းတွင် လှပသော နှင်းပွင့်ဖြူဖြူများ ထူထဲ သိပ်သည်းစွာ ကျနေရန် မလိုပါ။ ခရစ်စမတ် သစ်ပင်များမှာ အလှအပများ ပြင်ဆင် ချိတ်ဆွဲစရာ မလိုပါ။ လှပသေသပ်စွာ ထုတ်ပိုးထားသော လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို အပြန်အလှန် ပေးအပ်ရန် မလိုအပ်ခဲ့ပါ။ အိမ်နံရံပေါ်တွင် ခြေအိပ်နီနီလေးများ တန်းစီ ချိတ်ဆွဲပြီး ခရစ်စမတ်ဖိုးဖိုးကြီး အလာကို မျှော်နေစရာလည်း တကယ် မလိုအပ်ခဲ့ပါ။
ထို့အပြင် ခရစ်စမတ် အချိန်မှာ စိတ်လှုပ်ရှား ပျော်ရွှင်နေခဲ့သလား… ခရစ်စမတ်အချိန်မှာ အမှတ်တရတွေ ရှိခဲ့ဖူးသလား… ခရစ်စမတ် အကြိုညချမ်းမှာ ဘယ်သူတွေနဲ့ အတူတူ ရှိနေချင်သလဲ… အစရှိသော မေးခွန်းများအတွက် တိကျသေချာသော အဖြေတခုကလည်း ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိနှင့်နေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ တမင် အမှတ်တရ သတိရနေစေရန် တကူးတက သတိထား မှတ်သားနေစရာ မလိုအပ်ခဲ့သော တသက် မမေ့စရာ အမှတ်တရများက ဒီဇင်ဘာနှင့် ခရစ်စမတ်ကို အလိုလိုနေရင်း လှသည်ထက် လှပအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည်သာ…။
ညီမ ရိုစ့် (ကျွန်မဘဝ၏ အမှတ်တရ နေရာလေးတခု) ရဲ့ ခရစ်စမတ် အတွက် အမှတ်တရ Tag Post ပါ။ ဒီဇင်ဘာနဲ့ ခရစ်စမတ်ကို စွဲလန်း ချစ်ခင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး လှပအောင် ရေးသား ပုံဖေါ်ပေးထားပါတယ်…။ ညီမ ရိုစ့် ကျေနပ်မယ် ထင်ပါရဲ့…
Posted by သက်ဝေ at 11:30 PM 28 comments:
ခိုင်စိုးလင်း စီစဉ်တဲ့ ကျောင်းအကြောင်း E Book ထွက်ပါပြီ…။
ဒီစာအုပ်မှာ ပါဝင်ရေးသားကြတဲ့သူတွေကတော့ ကိုကိုသက်၊ ကျော်ညိုသွေး၊ ကြည်သက်ဟန်၊ ခိုင်စိုးလင်း၊ ချစ်ကြည်အေး၊ ညီဇံလှ၊ ညိုမင်းခ၊ နေဦး၊ ပန်ဒိုရာ၊ မိုးလှိုင်ည မှိုင်း ဆေး(၂)၊ Louise Jane Cher ၊ သက်ဝေ၊ ဟန်သစ်ငြိမ်၊ ဟယ်ရီလွင် နဲ့ သြမြိုင် တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်အတွက် ပုံတွေကို မလေးမေက ရေးခြယ်ပြီး ခိုင်စိုးလင်းက စာပြင်ပါတယ်။
ဒီနေရာ မှာ Download ချပြီး ဖတ်လို့ရပါပြီ။
ဒီ E Book မှာ ကိုယ့်လက်ရာ ဝတ္ထုတိုတပုဒ်နဲ့ အက်ဆေးတပုဒ် ပါ ပါတယ်။ ဝတ္ထုတိုလေးက အသစ်ရေးထားတာဖြစ်ပြီး အက်ဆေးကတော့ ဟိုးခပ်စောစောက ဘလော့ဂ်မှာ တင်ဖူးတဲ့ အဟောင်းတပုဒ်ကို နည်းနည်း ပြန်ပြင်ထားတာပါ။ ဝတ္ထုတိုလေးကို အရင်ဖတ်ကြည့်ပါနော်…
ဖုန်းသံနှင့်အတူ ပေါ်လာသော နံပါတ်များကို ကြည့်လိုက်သောအခါ ကိုယ်နှင့် ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်မှုမရှိသော ဂဏန်းများကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ထိုဖုန်းကို ဖြေရကောင်းနိုး မဖြေရ ကောင်းနိုး ချီတုံချတုံရှိနေဆဲမှာ ဖုန်းခေါ်သံက ရပ်သွားခဲ့သည်။ သို့သော် ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် ဖုန်းက နောက်တကြိမ် ထပ်မြည်လာခဲ့သည်။ ဟဲလို ဟူသော ကျွန်မအသံ အဆုံးမှာ တဖက်မှ အမျိုးသားတဦး၏ ဟဲလို ဟူသော အသံ ခပ်တိုးတိုးကို ပြန်ကြားလိုက်ရသည်။ ထိုအသံမှာ တိုးဖွသော်လည်း ကြည်လင် ပီသသည်။ ထို့အပြင် ထိုအသံထဲမှာ အဓိပ္ပါယ်ဖေါ်မပြတတ်သော အရာတခုခု ပါဝင် စီးမျောနေသယောင်၊ တခုခု ထူးခြားဆန်းကြယ်နေသယောင်…။ အတွေးမဆုံးခင်မှာပင် တဖက်မှ… ကျွန်မနာမည်ကို ရေရွတ်ရင်း ကျွန်တော် ဘယ်သူပါ… ဟု ဆိုလာလေသောအခါ…
ကျောင်းနောက်ဆုံးနှစ်မှာ သူ့ကို စတင် တွေ့မြင်ဖူးခဲ့တာဖြစ်သည်။ အတန်းသားများထက် အသက်ပိုကြီးပုံရပြီး ကြည်လင်သော အသားအရေနှင့် ခပ်ပိန်ပိန် အရပ်မြင့်မြင့် သာမာန် ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်သော်လည်း ထူးခြားနေသည်က သူ့မျက်ဝန်းတွေဖြစ်သည်။ ရီဝေသော မျက်ဝန်းမျိုးကို တွေ့ဖူးသည်၊ ထို့အတူ တောက်ပသော မျက်ဝန်းများကိုလည်း တွေ့ဖူးပါသည်။ သို့သော် ရီဝေပြီး တောက်ပ စူးလက်နေသော မျက်ဆံညိုညိုများနှင့် လှပသော ယောက်ျားလေးတယောက်၏ မျက်ဝန်းမျိုးကိုမူ သည်တခါသာ တွေ့ဖူးခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းကတော့ သူ့မျက်ဝန်းများကို ကြည့်ရင်း ရုပ်ရှင်မင်းသား James Dean နှင့် တူသည်ဟု ကောက်ချက်ချပါသည်။
နောက်ရက်များမှာတော့ စာသင်ချိန်တွေမှာ စာကို ကောင်းကောင်း စိတ်မဝင်စားနိုင်ပဲ သူ့အကြောင်းတွေကိုသာ စပ်စပ်စုစု လုပ်နေခဲ့မိပါသည်။ ကျောင်းနှစ်ရှည် ပိတ်ထားချိန်များမှာ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်သွားလုပ်ပြီး အခုမှ ကျောင်းပြန်တက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အတန်းထဲမှာ သူနှင့် သက်တူ ရွယ်တူ ခင်ခင်မင်မင် သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်း ရှိမနေခြင်းဖြစ်သည်။ စတွေ့ဖူးသည့်နေ့မှ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အတန်းတွေတိုင်းကို တချိန်မှ မပျက်အောင် ကျောင်းတက်မှန်သော၊ အေးဆေးသော မျက်နှာထား၊ တည်ငြိမ်သော အမူအရာတို့နှင့် သူသည် ဘေးဘီကိုလည်း သတိထား ဂရုပြု ကြည့်ရှုလေ့မရှိပါ။ အတန်းမစခင် ငါးမိနစ်ခန့်အလိုတွင် ကျွန်မတို့ တက်ရသော အဆောက်အဦးနှင့် မလှမ်းမကမ်းမှာ ကားရပ်ထားခဲ့ပြီး အတန်းပြီးလျှင်ပြီးခြင်း ကားလေးမောင်းကာ ပြန်သွားတတ်သည်။ သူ မောင်းသော ရွှေအိုရောင် ဆလွန်းကားလေး၏ နံပါတ်ကို ယခုချိန်အထိ ကျွန်မ အလွတ်ရနေဆဲ…။ သူကတော့ ဘာမှ သိလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
တမနက်မှာတော့ သူ ကားရပ်ပြီး အတန်းဆီသို့အသွား လှေခါးထစ်တွေနားမှာ ကျွန်မနှင့် ဆုံမိပါသည်။ သူ့အကြောင်းတွေကို သိလိုစိတ်ဖြင့် စိတ်ဝင်တစား စုံစမ်းခဲ့မိသော ကျွန်မ ရုတ်တရက် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ၊ မလုံမလဲနှင့် ခြေလှမ်းတွေ အမှားမှား အယွင်းယွင်း ဖြစ်သွားသော်လည်း သူက အေးအေးသက်သာပင် ကျွန်မကို ကျော်ဖြတ်ကာ အတန်းရှိရာကို ဦးတည်၍ သွားနေခဲ့သည်။ သူ့ပုခုံးတွင် လွယ်ထားသော ကချင်လွယ်အိပ် အနီရဲရဲလေးကို ငေးကြည့်နေရင်း ထိုလှေခါးထစ်တွေမှာ ကျွန်မ ခြေစုံရပ် ကျန်နေခဲ့ပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို သူငယ်ချင်းကို ပြောပြမိရင်း နောက်တခါ သူနှင့်တွေ့လျှင် ပြုံးရယ်ပြကာ နှုတ်ဆက်လိုက်မည်ဟု တီးတိုး တိုင်ပင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ဝမ်းနည်းစရာ… သူနှင့် ကျွန်မ နောက်တခါ တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင် မကြုံကြိုက်ခဲ့ပါ။
နောက် နှစ်ရက်ကြာသောအခါ သူနှင့်ဆင်တူ ကချင်လွယ်အိပ် အနီရောင်လေးကို ကျွန်မ ဝယ်ယူခဲ့မိပါသည်။ လွယ်အိပ်အသစ်နှင့် ကျွန်မကို သူငယ်ချင်းက သရော် လှောင်ပြောင်ရိပ်ကင်းသော အပြုံးစစဖြင့် ကြည့်ရင်း ခေါင်းတညိတ်ညိတ် လုပ်နေပါသည်။ ထိုအခါ ကျွန်မက အို… ကျောင်းမှာ ကချင်လွယ်အိပ် အနီရောင် လွယ်တဲ့သူတွေ တပုံကြီးမှ တပုံကြီး… ဟု ရှက်ရှက်နှင့် ဆင်ခြေပေးမိပါသည်။
Mid Term ပိတ်ပြီး ကျောင်းပြန်ဖွင့်သောအခါ မေဂျာအလိုက် အားကစားပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပပါသည်။ ထိုအခါ ကျွန်မတို့လည်း ယှဉ်ပြိုင်သမျှ ပွဲတိုင်းမှာ ကိုယ့်မေဂျာမှ ကိုယ့်မေဂျာ သည်းသည်းလှုပ်အောင် အားပေးခဲ့ကြပါသည်။ တညနေ ဘတ်စကက်ဘောပြိုင်ပွဲနားကို ရောက်သွားသောအခါ ကျွန်မတို့ လုံးဝ မျှော်လင့်မထားသော ကစားသမားတယောက်မှာ သူ ဖြစ်နေလေသည်။ လှပ သပ်ရပ်သော သူ၏ ကစားကွက်များကို မင်သက်စွာ ငေးကြည့် အံ့ကြနေမိသူမှာ ကျွန်မသာ…။ ထိုနေ့ကပွဲမှာ ကျွန်မတို့ မေဂျာက အနိုင်ရခဲ့ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ ကြိမ်းစပ် နီရဲနေသော လက်ဖဝါးများကို ဆေးလိမ်းရပါသည်။ ပြီးတော့ နောက်ထပ် နှစ်ရက် သုံးရက်လောက်အထိ အသံတွေလည်း ဝင်နေခဲ့ပါသေးသည်။
သည်လိုနှင့် နှစ်ကုန်ခါနီး စာမေးပွဲကြီး ဖြေဆိုရန် နီးကပ်လာပါသည်။ ထိုအချိန်မှာတော့ ရီဝေပြီး တောက်ပသော မျက်ဝန်းညိုများကို အသာ မေ့ဖျောက်ကာ အိမ်ကျယ်သော သူငယ်ချင်းတယောက်ဆီမှာ ကျွန်မတို့ တဖွဲ့လုံး စာစုကျက်ကြရပါသည်။ တချို့သော ဘာသာရပ်များမှာ အုပ်စုလိုက် တယောက်ကို တယောက် ကူညီ ရှင်းလင်းပေးလျှင် စာကျက်ရ အလွန်လွယ်ပါသည်။ ထိုအချိန်မျိုးတွင် ရှင်းပြနေသော စာများကို နားမဝင်နိုင်ပဲ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းမရှိသော သူ ဒီလောက် ခဲရာခဲဆစ် စာတွေကို တယောက်တည်း ဘယ်လိုများ ကျက်နေပါလိမ့်ဟု ပူပူပင်ပင် အတွေးနယ်ချဲ့နေသူမှာ ကျွန်မဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မကသာ စိတ်တွေပူနေတာ… သူကတော့ ဘာမှ သိလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
သည်လိုနှင့် နောက်ဆုံးနှစ် စာမေးပွဲရက်များကို ရောက်လာခဲ့သည်။ ဒီစာမေးပွဲများ ပြီးသွားလျှင် နောက်ကို သူနှင့် တွေ့ဆုံရန် အခွင့်အရေး မရှိနိုင်တော့ ဟု ကျွန်မကိုယ်တိုင် သေချာနေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် စာမေးပွဲ နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ ကြိုတင်ကြံစည်ထားခဲ့သည့်အတိုင်း ကျွန်မ သူ့ကို အရဲစွန့်ပြီး နှုတ်ဆက်ရန် (သို့မဟုတ်) အနည်းဆုံးတော့ ပြုံးပြခွင့်ရရန် သူနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ခွင့်ရရန် ကြိုးစားခဲ့မိပါသည်။ သို့သော် ထိုနေ့က ကျွန်မ ကံမကောင်းပါ…။ ကျွန်မ စာမေးပွဲခန်းထဲမှ ၁၅ မိနစ်ခန့် စောထွက်ပြီး သူ ထွက်အလာကို စောင့်နေခဲ့သော်လည်း ဘယ်လိုက ဘယ်လိုဖြစ်သွားသည်မသိ၊ သူနှင့်ကျွန်မ လွဲသွားကြသည်။ အတန်းထဲမှာ လူအားလုံးကုန်သည့်အထိ သူ့ကို မတွေ့ရသောအခါ သူ့ကားလေး ရပ်နေကျနေရာကို သွားကြည့်မိသည်။ သူရပ်နေကျ နေရာမှာ ကားလေး မရှိတော့ပါ။ ဒါဆို သူ ပြန်သွားပြီပေါ့…။ ထိုအချိန်လေးမှာ ကျွန်မ အလွန်အမင်း ဝမ်းနည်းနေခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက်မှာတော့ ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ မသိလိုက်ခင်မှာပင် ခြေလှမ်းများက ကျောင်းသားရေးရာဌာနဆီသို့ ဦးတည်နေမိလျက်သား…။ ဘာအတွက်ဟု မရေရာ မသေချာသော်လည်း ကျောင်းသားရေးရာဌာနမှ ကျွန်မနှင့် သိနေသော အန်တီကြီးတယောက်ထံမှ တဆင့် သူ့အိမ်လိပ်စာကို ရလာခဲ့ပါသည်။ သည်လိုနှင့် ကျောင်းပိတ်ပြီး နှစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင် အိမ်ကလူကြီးများ မသိအောင် ကားခိုးမောင်းကာ သူ နေထိုင်ရာ လမ်းထိပ်ကို မယောင်မလည်နှင့် ရောက်သွားခဲမိ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကားမောင်းတတ်ခါစ ဖြစ်နေသည်က တကြောင်း၊ အိမ်ကမသိအောင် တိတ်တိတ်လေး ခိုးမောင်းလာသည်က တကြောင်း၊ လမ်းမှာ အသိမိတ်ဆွေများနှင့် တိုးမည်ကို ကြောက်သောစိတ်၊ သူ နေထိုင်ရာ အနီးအနားကို မဆီမဆိုင် ကျူးကျော် ရောက်ရှိလာသော ကျွန်မကို သူ တွေ့မြင်သွားလေမလားဟု စိုးရွံ့သောစိတ်တို့ဖြင့် လူတကိုယ်လုံး ထူပူကာ ဘေးဘီဝဲယာကို အနည်းငယ်မျှ စောင်းငဲ့မကြည့်ရဲပဲ အိမ်သို့ ပြန်ရောက်လာပါသည်။ ထိုနေ့ညမှ စတင်ကာ တပတ်တိတိ ကျွန်မ အပြင်းဖျားပါသည်။ သေချာပါသည်… သူကတော့ ဘာဆို ဘာမှ သိလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
ဘယ်သူမှ မသိလိုက်သော၊ သိဖို့လည်း မကြိုးစားခဲ့မိသော သံယောဇဉ်အပိုင်းအစလေး တခုသည် ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ခင် အချိန်မှာပင် အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်သွားခဲ့ပြီပဲ ဟု တွေးရင်း တချို့သော အချိန်တွေမှာ သူ့ကို သတိတရရှိလိုက်၊ တချို့အချိန်တွေမှာ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်လိုက်နှင့်...။ ထို့နောက်မှာတော့ လှပပြီး သာယာသော ဘဝတခုမှာ အလိုက်သင့် အလျားသင့် စီးမျော ပျော်ဝင်ရင်း... သူ ဘယ်များရောက်နေပါလိမ့်ဟု ရံဖန်ရံခါမှသာ သတိရဖြစ်တော့သည်။ သည်လိုနှင့် ဆယ်စုနှစ်တခုမက ဖြတ်သန်း လွန်မြောက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
တအံ့တသြမျက်နှာဖြင့် ဖုန်းပြောနေသော ကျွန်မကို အမျိုးသားက အထူးတဆန်း ဖြစ်လို့နေခဲ့သည်။ ဖုန်းပြောအပြီးမှာ ဖုန်းခေါ်လာသောသူသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကွဲကွာနေသော ကျောင်းနေဘက် ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်းတယောက် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆင်ပြေလျှင် တကြိမ်တခါမျှ တွေ့ဆုံလိုကြောင်း ပြောပြသောအခါ အမျိုးသားက ကြည်ဖြူစွာပင် အိမ်ကို ထမင်းစားဖိတ်ခွင့် ပေးခဲ့သည်။
အိမ်ကို လာလည်သောနေ့မှာ သူ၏ ဟန်ဆောင်မှုကင်းပြီး ရိုးသားသန့်စင်သော မျက်ဝန်းညိုများနှင့် ပျူငှာစကား သွက်လက်စွာ ဆိုတတ်မှုတို့ကြောင့် တခဏအတွင်းမှာပင် ကျွန်မအမျိုးသားနှင့် သူ ငယ်ပေါင်းကြီးဖေါ်များပမာ အကျွမ်းတဝင် ရင်းနှီးကာ စကားလက်ဆုံ ကျသွားလေတော့သည်။ ထမင်းဝိုင်းတွင် ဘေးနားမှနေ၍ လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်ပေးရင်း ကျွန်မက နားထောင်သူ သက်သက်သာ…။ သူတို့ပြောနေကြသော အကြောင်းအရာတွေက ကျွန်မ နားမလည်သော နိုင်ငံရေးတွေလည်း ပါသည်… သူ လက်ရှိ အလုပ်လုပ်နေသော ဓါတ်ငွေ့တွေအကြောင်း၊ ရေနံချက်စက်ရုံတွေအကြောင်းလည်း ပါသည်၊ ပြီးတော့ သစ်တော ပြုန်းတီးမှုတွေနှင့် အတူ မြန်မာ့ ကျွန်းသစ်တွေအကြောင်းလည်း ပါသေးသည်။
သူတို့ပြောသမျှကို တိတ်ဆိတ်စွာ ငေးမောနေသော ကျွန်မကို သူက သားလေးနှစ်ယောက်ရှိသော သူ့မိသားစုလေးအကြောင်း ပြောပြရင်း စကားဝိုင်းအတွင်း ခေါ်သွင်းခဲ့တာဖြစ်သည်။ သားကြီးက ငါးနှစ်၊ သားငယ်လေးက နှစ်နှစ် တဲ့…။ မိန်းမပီပီ သူ အိမ်ထောင်ကျသောခုနှစ်ကို စိတ်ထဲမှာ အပြေးအလွှား ခန့်မှန်းကြည့်မိသေးသည်။ ထိုနေ့က စကားတွေကောင်းပြီး ည ၁၁ နာရီလောက်မှ သူ ပြန်သွားသည်။ မကြာခင် သူ့မိသားစု လိုက်လာကြတော့မှာဖြစ်ပြီး ထိုအခါကျမှ တခေါက် လာလည်အုံးမည်ဟုလည်း ပြောသွားသေးသည်။ စကားနည်း အေးဆေးကာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းလည်း နည်းပါးသော ကျွန်မအမျိုးသားက သူ့ကို နှစ်လိုစွာ ရင်းနှီး ခင်မင်သည်ကို တွေ့ရတော့ ကျွန်မ ဝမ်းသာမိပါသည်။
ကျောင်းတုန်းက ကျွန်မကို စိုးစဉ်းမျှ သတိထားမိလိမ့်မည် မဟုတ်ဟု ထင်ထားသော်လည်း ဆယ်စုနှစ်တခု လွန်မြောက်လာသည်အထိ ကျွန်မကို မှတ်မှတ်ထင်ထင် ရှိနေခြင်းနှင့် ကျွန်မကို သတိတရ ရှာဖွေ ဆက်သွယ်လာခြင်းများအပေါ်မှာ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် မှင်သက် အံ့သြမိနေဆဲ…။ နောက်တနေ့မှာ ထို့ထက် ပိုမိုအံ့သြစရာတခုကို သူ ပြုမူခဲ့တာဖြစ်သည်။ ကျွန်မ၏ ဖုန်းထဲကို သူ့သား ဓါတ်ပုံလေးတွေ ပို့လာပြီး သားလေးတွေ၏ အမည်ကိုပါ ရေးပြ မိတ်ဆက်လာခဲ့တာ ဖြစ်သည်။ အံ့သြစရာမှာ သူ့ သားလေးနှစ်ယောက်၏ နာမည်စာလုံး သုံးလုံးအနက်မှ နောက်ဆုံးစာလုံးသည် ကျွန်မနာမည်၏ နောက်ဆုံးစာလုံးနှင့် တထပ်တည်း တူညီနေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
အရာရာကို သေချာချင်သော ကျွန်မသည် အလကားနေရင်း လောဘကလည်း ပုတ်လောက်ကြီး ကြီးချင်နေသေးသည်…။ ထိုဓါတ်ပုံလေးနှင့် နာမည်များကို လက်ခံရရှိပြီးချိန်မှာ ကျေးဇူးတင်စကားပင် ပြန်မဆိုနိုင်ပဲ သိချင်လှသော မေးခွန်းတခုကို ဒရောသောပါးနိုင်လှစွာ မေးခဲ့မိသည်။ ကျွန်မသိလိုသောအရာကို သူကလည်း ချက်ချင်းပင် မဆိုင်းမတွ အဖြေပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှာ သူ ပြုံးကောင်း ပြုံးနေပါလိမ့်မည်။ ကျွန်မ၏ မေးခွန်းမှာ “ကျေးဇူးပြုပြီး ရှင့် အမျိုးသမီးနာမည်လေးများ ပြောပြနိုင်မလား” ဟု ဖြစ်ပြီး သူပြန်ဖြေလာသော အဖြေထဲမှာ ကလေးတွေနာမည်နှင့် ဆင်ဆင်တူသော စာလုံး တလုံးတပါဒမှ မပါဝင်ပါ။
ကျောင်းတက်ရက်များထဲမှာ တယောက်ကိုတယောက် မသိလိုက် မသိဖာသာ နေခဲ့ကြရင်း အကြည့်တချက်၊ အပြုံးတစ ဖလှယ်ရန် ဝေးစွ… မျက်နှာချင်းပင် တည့်တည့် မဆိုင်ခဲ့ဖူးသော၊ ကျွန်မ၏ တိတ်တခိုး ချစ်ခင် နှစ်လိုမှုကို သူသိသာ မြင်သာအောင် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ မဖေါ်ပြခဲ့ဖူးသော၊ အတန်းဖေါ်တွေထဲမှာ ဘာမှ မထူးခြားသော ကျွန်မလိုလူတယောက်ကို ယခုကဲ့သို့ မှတ်မှတ်သားသား သတိထားမိလိမ့်မည်ဟု လုံးဝ လုံးဝ မျှော်လင့်မထားခဲ့ပါ။
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် တိတ်ဆိတ် လျှို့ဝှက်နိုင်ခဲ့သော သူ့ထံမှ သံယောဇဉ် တစွန်းတစကို နှစ်ပေါင်း များစွာကြာမြင့်မှ သိခွင့်ရခဲ့ခြင်းအတွက် ကျွန်မ ဝမ်းနည်း ဝမ်းသာ ဖြစ်ရပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်မ ကျေနပ်ပါသည်။ လေးနက် လှပသော… ပြီးတော့ ဖြူစင် သန့်ရှင်းသော သံယောဇဉ်ကြိုးစများနှင့်အတူ ငယ်ငယ်က နှစ်သက်ခဲ့ဖူးသော သူ့ မျက်ဝန်းညိုများကို ကျွန်မ တသက်စာ အမှတ်တရ သိမ်းဆည်းသွားမည်သာ…။
၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁
Posted by သက်ဝေ at 8:15 PM 21 comments:
ဒီဇင်ဘာရဲ့အိပ်မက်ဟောင်းတွေဟာ မနေ့ တနေ့ကလို နွေးထွေး လတ်ဆတ်ဆဲ အဲဒီ အိပ်မက်ဟောင်းတွေကို ပွေ့ပိုက် သယ်ဆောင်ရင်း ပြာမှိုင်းမှိုင်းညနေတခုမှာ တယောက်တည်း လမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ် အောချတ် လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ဒီဇင်ဘာညနေခင်းတွေရဲ့ သင်္ကေတ အရောင်စုံ မီးပွင့် မီးခိုင်တွေက မျက်စိကျိန်းစရာ ပျိုးပျိုးပြက်ပြက် လင်းလက်လို့ ပြုပြင်မှုလွန်ကဲပြီး သဘာဝရဲ့ အနှစ်သာရ ကွယ်ပျောက်နေတဲ့ ထင်းရှုးပင်အတုတွေကလည်း နေရာတကာမှာ စူးစူးရှရှ ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ ဖြူပွပွ ဆပ်ပြာမြှုပ်တွေဟာ အတုအယောင် နှင်းမှုန်တွေအဖြစ် ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် အပြုံးတုတွေ ဝေလို့ လမ်းဘေးပလက်ဖေါင်း တဖက်တချက်မှာ နိုင်ငံတကာက လူမျိုးခြားတွေရဲ့ ဘာသာစကားပေါင်းစုံကို ကာရန် မညီမညွတ်နဲ့ အတိုင်းသား ကြားနိုင်တယ် အဲဒီ ပလက်ဖေါင်းပေါ်မှာပဲ ကဗျာလွတ် ကပြ အသုံးတော်ခံနေတဲ့သူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တေးဂီတသံစဉ်တွေ သီဆို ဖြေဖျော်နေတဲ့သူ ကြိမ်ပုတီးလုံးတွေကို ခါးမှာပတ် တပတ်ပြီး တပတ် လှည့်ပြနေတဲ့သူ သူတို့တွေနဲ့အတူ ရေခဲမုန့်လှည်းတွေကလည်း ကြိုးကြား ကြိုးကြား ရှိနေတယ် ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တွေ အလှဆင် မီးရောင်တွေနဲ့ ကုန်တိုက်ကြီးတွေပေါ်မှာ သူ့ထက်ငါ တိုးဝှေ့ ပြေးလွှား အမျိုးအမည် စုံလင်လှတဲ့ ပစ္စည်းတွေ လျှော့ဈေးချတဲ့ အချိန် နေရာတိုင်းမှာ တန်းစီ ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားတယ် အရာရာမှာ သုတ်သီးသုတ်ပြာနဲ့ အလိုလိုနေရင်း အရေးတွေကြီးနေတတ်တဲ့ ခွင့်ပြုပါ ငါ့ကို ခွင့်ပြုပါ လို့ တစာစာ ရွတ်ရင်း အပြေးတပိုင်းနဲ့ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် သွားလာနေတတ်တဲ့ ကျွန်းသူ ကျွန်းသားတွေရဲ့ စိတ်ရှည် သည်းခံနိုင်စွမ်းကို ဒီနေရာမှာ အထင်းသား တွေ့နိုင်တယ် အများသူငါလို တိုးဝှေ့ တမေ့တမော တန်းစီပြီး မစောင့်ဆိုင်းနိုင်တဲ့သူတယောက်အတွက် နေရာက အလွဲ အချိန်က အလွဲ အရာရာဟာ လွဲချော် မှားယွင်းနေတော့တာ လူရေစီးကြောင်းကြီးနဲ့ ဆေးလိပ်မီးခိုးတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ရှားရင်း လူဦးရေ ထူထပ်မှု နည်းမယ်လို့ ထင်ရတဲ့နေရာကို လျှောက်လာခဲ့တယ် တကယ်တော့ ဒါဟာ အပြန်လမ်းပဲလို့ ရုတ်တရက် သိလိုက်တယ် မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ သတိရခြင်းတွေကတော့ ကိုယ်နဲ့အတူတူ ထပ်ချပ်မကွာ တပါတည်း လိုက်ပါ လျှောက်လှမ်းလို့ အမှတ်တရ မှာဖြစ်လိုက်တဲ့ မိုခါးတခွက်ဟာ သတိရခြင်းတွေကို နှစ်ဆမက တိုးပွားစေခဲ့တယ် အဲဒီသတိရခြင်းတွေကို အရည်ပျော်လို ပျော်ငြား မိုခါးပူပူထဲ စိမ်လိုက်တယ် အဲဒီနောက် စားပွဲပေါ် မေးထောက်လို့ လမ်းတလျှောက်ကို အေးအေးသက်သာပဲ ငေးကြည့်နေလိုက်တော့တယ် လှမ်းမြင်နေရတဲ့ စိန့်မာတင်လမ်းကြားမှာ သစ်ရွက်ဟောင်းတချို့ မိုးရေတွေ စိုစိုစွတ်စွတ်နဲ့ ချမ်းချမ်းစီးစီး လှဲလျောင်းနေကြတယ် သူတို့ကို ကြည့်နေမိတဲ့ အကြည့်တွေမှာလည်း မိုးရေတွေ စိုစွတ်လာသလို ခံစားရတယ် ခေါင်းလောင်းတီးပြီး အလှူခံနေတဲ့သူတွေကို တွေ့တော့ ဆူနာမီ နှစ်ပတ်လည်ကို ရောက်တော့မယ်ဆိုတာ သတိရသွားတယ် မကြာခင်မှာ ခရစ်စမတ်ကို ရောက်တော့မယ် နှစ်သစ် တနှစ် ကူးတော့မယ် ပြီးတော့ အသက်တနှစ် ပိုကြီးလာတော့မယ် ကြည့်ပါအုံး… တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ညက မှောင်လာတယ် လမ်းပေါ်မှာ မီးရောင်တွေ ပိုလင်းလာတယ် ကားတွေ အသွားအလာ ကျဲပါးစ ပြုလာပြီ ခုနက ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတဲ့ လမ်းသွားလမ်းလာတွေ စဲ စ ပြုလာပြီ ထိုင်နေတဲ့ ကော်ဖီဆိုင် မှောင်မှောင်လေးမှာလည်း လူရှင်း စ ပြုလာပြီ စားပွဲပေါ်က မိုခါးတခွက် တဝက်တပျက်နဲ့ အေးစက်ခဲ့ပေမယ့် အတွေးထဲက သတိရခြင်းတွေကတော့ နွေးထွေးဆဲ ဘယ်အချိန်ရောက်ရောက် ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ဘယ်တော့မှ ဖယ်ခွာ မေ့ဖျောက် ချန်လှပ်ထားလို့ မရနိုင်တဲ့ သတိရခြင်းတွေကို နှုတ်တိုက် ရေရွတ်ပြနေစရာ မလိုပဲ နေရာမှန်ကို ရောက်သွားစေဖို့ မမေ့မလျော့ လှမ်းပို့လိုက်ပါတယ် တကယ်တော့ ဒါဟာ တနှစ်စာ…
Posted by သက်ဝေ at 12:30 PM 18 comments:
Credit Card သုံးကြသူတွေအတွက် ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းလေး ဝေမျှလိုက်ပါတယ်…။
မကြာသေးတဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းက ကိုယ့် DBS Credit Card Bill ထဲမှာ စကာင်္ပူဒေါ်လာ ၃၀၀ ကျော် အပိုပါနေတာ တွေ့လိုက်တယ်။ သုံးထားတဲ့နေရာက Orchid Country Club မှာပါ။ အဲဒီနေရာဟာ ကိုယ်နဲ့ရော ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ပါ ဘယ်လိုမှ အဆက်အစပ်မရှိတဲ့ နေရာတခုဖြစ်ပြီး သုံးထားတဲ့ အချိန်ကလည်း စနေနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီကျော်မှာပါ…။ အဲဒီနေ့ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ်က မိသားစုနဲ့ အပြင်မှာ ထမင်းစားနေတဲ့ အချိန် ပြီးတော့ အဲဒီ Credit Card ကလည်း ကိုယ်နဲ့ မကွာ ရှိနေတယ်။ အဲဒီကိစ္စကို တနင်္လာနေ့ညမှာ သိပြီး သိသိချင်း ဘဏ်ကို ဖုန်းဆက် အကျိုးအကြောင်း ပြောပြပြီး ကဒ်ကို ပိတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ဘဏ်က အဲဒီ Orchid Country Club ကို ဆက်သွယ်ပြီး ဘယ်လို ဖြစ်သလဲ အရင်စုံစမ်းပါလို့ ပြောတယ်။
ဒါနဲ့ နောက်တနေ့ မနက်မှာ အဲဒီ Orchid Country Club ကို ဆက်သွယ်ပါတယ်။ Orchid Country Club ရဲ့ Reception ကနေ တဆင့် Account Dept. ကို လွှဲပေးတယ်။ Account Dept. က ဒီစုံစမ်းမှုကို Official ဖြစ်စေဖို့ Email ပို့ ခိုင်းပါတယ်။ နှစ်ရက်အကြာမှာ သူတို့ဆီက စာပြန်လာပါတယ်။ သူတို့ဆီက ပြန်လာတဲ့ မှတ်တမ်း မှတ်ရာတွေအရ J နဲ့စတဲ့ နာမည်၊ စကာင်္ပူ နေရပ်လိပ်စာ အပြည့်အစုံနဲ့ အမျိုးသမီးတယောက် အဲဒီ Orchid Country Club မှာ တညတာ လာရောက် တည်းခိုအပြီးမှာ ကျသင့်ငွေကို ပေးသွားတာပါ။ Hotel တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း Check-in လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ အဲဒီအမျိုးသမီးရဲ့ ကဒ်ကို Online Transaction နဲ့ Verify လုပ်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ Check-out လုပ်တဲ့ အချိန်မှာမှ ကိုယ့်ကဒ်နံပါတ်နဲ့ ကျသင့်တဲ့ ပိုက်ဆံ ဒေါ်လာ ၃၀၀ ကျော်ကို ယူထားတာပါ။
ဂဏန်း ၁၆ လုံးစီပါတဲ့ Credit Card မှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သူ့ရဲ့ ကဒ်နံပါတ်နဲ့ ကိုယ့်နံပါတ်နဲ့က နောက်ဆုံး ဂဏန်း သုံးလုံးပဲ ကွာပါတယ်။ ပြဿနာက ဘာလဲဆိုတော့ အဲဒီ ပိုက်ဆံယူတဲ့နေရာက Credit Card ကို Offline Transactions နဲ့ ကဒ်နံပါတ် ၁၆ လုံးကို တလုံးချင်းစီ နှိပ်ပြီး ပိုက်ဆံယူလိုက်တဲ့ ကိစ္စပါပဲ။ အဲဒီလို နံပါတ်တွေ နှိပ်တဲ့အချိန်မှာ နောက်ဆုံးနံပါတ် သုံးလုံး မှားနှိပ်မိတာ လို့ Orchid Country Club ရဲ့ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်က ရှင်းပြပါတယ်။
ကိုယ့်အတွက်တော့ Credit Card ကို Offline ကနေ နံပါတ်နှိပ်ပြီး ပိုက်ဆံယူတဲ့အဖြစ်ကို ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ် ကြားဖူးတာပါ။ ဟိုအမျိုးသမီးကတော့ သူ့ရှေ့ Bill လာချရင် လက်မှတ်ထိုးလိုက်မှာပဲ၊ ကိုယ်တိုင်လည်း ဈေးဝယ်ပြီးရင် ကိုယ့်ရှေ့ကို Bill ရောက်လာရင် နံပါတ်တွေ ဘာတွေ ဘယ်ကြည့်ဖြစ်မှာလဲ၊ ဒီလိုပဲ လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကဒ်နံပါတ်နဲ့ သူများလက်မှတ်ကြီးနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ဒီကိစ္စမှာ Cashier က Payment ကို Offline Transactions နဲ့ ယူတာ ဘာကြောင့်လဲ… ဒါ ရိုးရိုးသားသား ဟုတ်ရဲ့လား လို့ တွေးစရာရှိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ တာဝန်ကျ Cashier ဘယ်သူလဲ လို့ မေးတော့ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်က နာမည် မပြောပြပါဘူး ပြီးတော့ အဲဒီလို Offline က ယူတာ ထုံးစံပါပဲလို့ ပြောတယ်…။ သူ အဲဒီလို ပြောပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ သူတို့ဝန်ထမ်းတွေဖက်က ကာကွယ်ပြီး ပြောတယ်လို့ပဲ ထင်နေမိတယ်။ (Hotel လုပ်ငန်းမှာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူများ Check-Out လုပ်ရင် ဒီလို Offline နဲ့ ပိုက်ဆံယူကြတယ်များ ကြားဖူးပါသလား… သိရင် ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်)
ဒီကိစ္စဟာ Fraud Transaction မို့ ရဲတိုင်ပြီး အမှုဖွင့်ချင် ဖွင့်ပါ လို့ Bank က ပြောတယ်။ ရဲတိုင်မယ်ဆို Orchid Country Club က တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ၊ အဲဒီအချိန်မှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ Cashier... ပြီးတော့ အဲဒီ J နဲ့ စတဲ့ အမျိုးသမီး... Hotel Reception က CCTV... စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားတွေ… စတာတွေနဲ့အတူ တိုင်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လည်း ဒီအမှုမှာ တချိန်လုံး ကန့်လန့် ကန့်လန့် နဲ့ ပါနေမှာလေ။ Orchid Country Club က သူတို့ အမှားမို့ ဒီ ပိုက်ဆံကို ပြန်ပေးမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် Banking တို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဒီ Bill ကိုတော့ ဆောင်လိုက်ရမယ် သူတို့ ပြန်ပေးမယ့် ပိုက်ဆံကတော့ ရက်ပေါင်း ၆၀ ကျော် ကြာမှ ဝင်မယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်တိုင်က ရုံးရောက် ဂါတ်ရောက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ် မခံနိုင်တော့တဲ့အတွက် ရဲတိုင်ဖို့ကိစ္စကို လက်လျှော့လိုက်ပါတယ်…။
ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အချက်ကတော့ Credit Card တခုရဲ့ လုံခြုံမှုပါ။ Credit Card တွေကို ထပ်မပွားနိုင်အောင် Chip တွေ ထည့်လိုက်တာလည်း အားလုံး အသိပဲ။ Credit Card ကို သုံးပြီး Online မှာ တခုခု ဝယ်တော့မယ် ဆိုရင် (၅ ဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာ ကစလို့) ကဒ်နံပါတ် ရိုက်ထည့်ပြီးရင် CCV ဆိုတဲ့ နံပါတ် ၃ လုံးကို ထည့်ကြရတယ်။ ဒီကမှတခါ ပိုပြီး လုံခြုံအောင် Hand Phone ထဲကိုလာတဲ့ OTP (One Time Password) ဒါမှမဟုတ် Bank တွေက ပေးထားတဲ့ IB Message Token လေးတွေကို နှိပ်… ဒီလို အဆင့်ဆင့် ဖြတ်ကျော်ပြီးမှ အသုံးပြုလို့ ရတယ် မဟုတ်လား။ အခုအတိုင်းဆို အဲဒါတွေအားလုံး Rubbish ပဲပေါ့…။
Credit Card တခုကို နံပါတ် ၁၆ လုံး သိရုံနဲ့ ဘယ်နေရာကမဆို Offline ကနေ သုံးလို့ရသလို ဖြစ်မနေပေဘူးလား။ ပြီးတော့ နံပါတ် ၁၆ လုံးကို ရိုက်ချင်သလို (Random) ရိုက်ပြီး ကျရာ နံပါတ်မှာ Offline နဲ့ အလွယ်တကူ ပိုက်ဆံသုံးလိုက်လို့ ရသလို ဖြစ်မနေပေဘူးလား။ တခါ Credit Card နံပါတ် ၁၆ လုံးမှာ ရှေ့ဆုံး ၄ လုံးက Bank Code မို့ ဆင်တူတယ်ထား… ကျန်တဲ့ နံပါတ် ၁၂ လုံးမှာ ၉ လုံး တူပြီး နောက်ဆုံး ၃ လုံးပဲ လွဲတယ်ဆိုတာရော ဖြစ်သင့်သလား...။ မေးခွန်းတွေ အများကြီးပါ။
အခု အဖြစ်အပျက်မှာ သုံးထားတဲ့ ပိုက်ဆံက စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၀၀ ကျော်ဆိုတော့ သိပ်မနည်းပေမယ့် သိပ်များလှတယ်လို့လည်း မဆိုနိုင်ဘူး။ မပေးမဖြစ် ပေးရတော့မယ်ဆို ပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိသေးတယ်…။ ဒါပေမယ့် ဒီ့ထက်များတဲ့ Amount ဆို ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ပြီးတော့ အခု သုံးတဲ့နေရာက ဒီစင်္ကာပူမှာ… ချက်ချင်း ဖုန်းဆက်လို့ ရတဲ့နေရာ၊ မတတ်သာလို့ လူကိုယ်တိုင် သွားရစေဦးတော့ နာရီဝက်အတွင်း အရောက် သွားနိုင်တဲ့ နေရာ…။ တကယ်လို့များ တခြား တနိုင်ငံ ကိုယ်လက်လှမ်းမမှီတဲ့ နေရာကနေ တကြိမ်ထဲနဲ့ Credit Limit ကုန်အောင် သုံးသွားရင် ဘယ်လိုရှင်းရပါ့မလဲ…။
ပြီးတော့ ဒီပုံအတိုင်းဆိုရင် ကိုယ့် Credit Card က နံပါတ်တွေကို လူမမြင်အောင် သေသေချာချာ သိမ်းထားရတော့မလို ဖြစ်နေပြီပေါ့။ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ထိုင်ရာက မထပဲ စားပွဲထိုးကို Credit Card လေး လှမ်းပေးပြီး ပိုက်ဆံရှင်းတဲ့ အချိန်တွေမှာရော စိတ်ချရပါတော့မလား။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဖုန်းတွေတိုင်းမှာ ကင်မရာတွေ ပါနေကြတာ… ကိုယ့် ကဒ်ကို ယူသွားတုန်းမှာ ရှေ့ရော နောက်ပါ ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်ရင် အင်ဖေါ်မေးရှင်း အကုန်ပါသွားပြီ… တပျော်တပါး သုံးပါလေ့ပဲ…။
ပြီးတော့ Bank တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြဿနာတခုခု ဖြစ်ပြီးရင် ပိုက်ဆံ ပြန်ရဖို့က ဟိုးနောက်ဆုံး အဆင့်မှာ… လောလောဆယ်မှာတော့ ဘာညာ မပြောနဲ့ Bill ထဲ ပါလာသမျှ အကုန်ရှင်းပေတော့ပဲ…သူတို့ ဖက်က လုံးဝ လျှော့ပေးတာ မဟုတ်ဘူး…။ (မရှင်းပြန်ရင် အတိုးက တက်လာအုံးမှာ…)
ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်ကတော့ ကိုယ့်အမျိုးသားက အဲဒီ DBS Bank က တာဝန်ရှိသူတယောက်ကို သူတို့ရဲ့ Credit Card လုံခြုံမှုစနစ်အကြောင်း Complaint လုပ်တဲ့ E mail တစောင် ရေးလိုက်တယ်။ ဒီကိစ္စအတွက် ကျိုးကြောင်း ညီညွတ်ပြီး ဆီလျော်တဲ့ ရှင်းလင်းချက်ပေးပါ… မင်း မရှင်းနိုင်ရင် ဒီစာကို ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ အထက် လူကြီး (သို့) CEO အထိ တင်ပေးပါလို့ ပြောထားတယ်။ ခုထိတော့ Bill ကလွဲလို့ ဘာမှ ပြန်မလာသေးဘူး။
လောလောဆယ်မှာ ကိုယ့်မှာ ရှိနေတဲ့ အဲဒီ DBS Bank က Credit Card လေးခုကို ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က စလို့ တခုချင်း ဖျက်ပစ်နေပါပြီ။ ဘာလို့ဖျက်တာလဲ ဆိုတဲ့ အမေးကို လုံခြုံရေး စိတ်မချရလို့ လို့ ဖြေလိုက်ပါတယ်။ အားရလောက်စရာ ပါပဲ… သူတို့ဆီက ဘာမှ ရေရာတဲ့ တုန့်ပြန်မှု မရပါဘူး။ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရ ဘဏ်ကြီးတခုဖြစ်တဲ့ အဲဒီ DBS Bank ဟာ တဆိတ်တော့ တာဝန်မဲ့လွန်းတယ် လို့ ထင်မိတယ်။ ဘယ်မှာလဲ သူတို့ ပြောပြောနေတဲ့ လုံခြုံရေး… ဘာဆို ဘာတခုမှ မလုံခြုံဘူး…။
ကိုယ် ပေါ့ဆလို့၊ ကိုယ့်ကဒ်ပျောက်သွားလို့ မဟုတ်ပဲ အခုလို အသားလွတ်ကြီး ခံလိုက်ရတဲ့ ပြဿနာအတွက် အတော် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ်…။ ဘာ Credit Card မှ ကိုင်ချင်စိတ် မရှိတော့အောင်ပါပဲ…။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း Credit Card နဲ့ ပတ်သက်ရင် သတိထားကြဖို့ အသိပေးချင်လို့ ဒီစာကို ရေးပါတယ်…။
Posted by သက်ဝေ at 4:00 PM 34 comments: